Shirka arimaha Soomaaliya oo maanta la soo gabagabaynayo – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Shirka arimaha Soomaaliya oo maanta la soo gabagabaynayo
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Brussels ee caasimada dalka Belgium lagu soo gaba gabeeyo shirka arrimaha Soomaaliya, oo shalay halkaasi ka furay Ra’iisul Wasaara ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaana qaybta hore ee madashaan shalay furay.
Shirkan oo ay ka qeyb galayaan Madaxda dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada, Bulshada rayidka iyo wadamada daneeya arimha Soomaliya ayaa qaybtiisa hore shalay waxaa looga hadlay arrimo badan oo la xiriira xaalada guud ee dalka Soomaaliya.
Qaybta labeed ee Shirka oo maanta dhacaya ayaa ka duwan kii shalay, waxaana shir guddoominaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), waxaana gabagabadiisa laga soo saari doonaa war-murtiyeed ay is la qaateen dhamaan madaxdii halkaas isugu tagay.
R.W Kuxigeenka Soomaaliya ayaa sheegay in la geli doonaa qeybta ugu weyn ee shirka oo uu furi doono Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo,kaasoo uu barbar socda shir looga hadlayo barakacayaasha, ganacsiga iyo haweenka doorka ay ku leeyihiin amniga.
← Maraykanka oo diyaar u ah inuu wadahadal toos ah la galo Talibaan
Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo kulan la qaatay gudiga culimada Soomaaliyeed →